Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta|Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta
Waxqabadyada waxqabadka waxay gacan ka geystaan ​​qiimeynta waxtarka nidaamyada ka jawaab celinta dhibaatada guri la'aanta inta ay ka shaqeynayaan si loo hubiyo in hoy la'aantu ay dhif tahay, kooban tahay oo hal mar tahay. Wasaaradda Ganacsiga waxay u aqoonsatay waxyaabaha soo socda inay yihiin kuwa ugu halista badan waxqabadka nidaamka hoylaawayaasha:
Kala-mudnaan siinta qoysaska hoylaawayaasha ah ee aan dahsooneyn
Kordhinta bixitaanka guryaha joogtada ah
Yaraynta dib ugu noqoshada hoy la'aanta
Yaraynta waqtiga dheer ee hoylaawe
Ilaha maalgelinta gobolka ee cusub ayaa ahaa sharciga loo gudbiyay kadib kalfadhigii sharci dejinta ee 2021. Lacagtaani waxay ujeedadeedu tahay inay ka hortagto raritaanka iyadoo siineysa kheyraadka qoysaska ay u badan tahay inay noqdaan hoylaawe, la kulmaan cawaaqib caafimaad oo daran, ama labadaba, ka saaridda kadib. Intaa waxaa dheer, miisaaniyadu waxay mudnaanta siiyaan qoysaska si aan saamayn lahayn u saameeyay xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha, hoy la'aanta, iyo degganaansho la'aanta guryaha. dheeraad ah halkaan ka baro.
Xariirka guud ee ku salaysan mareegaha waxa uu bixiyaa macluumaadka halka joogsiga ah ee kaalmada guri la'aanta, kharashka, iyo waxqabadka: https://public.tableau.com/profile/comhau#!/
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan cabbiraadaha waxqabadka nidaamka guri la'aanta ee uu ka warbixiyo ama u baahan yahay ganacsi, fadlan dib u eeg dukumeentigan: Qiyaasaha Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta (PDF)
Warbixinnada Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta Gobolka Washington
Waxaa la daabacaa sanad walba, Kaarka Warbixinta Degmada iyo Isbarbardhigga Sannad ilaa Sannadka waxay bixiyaan natiijooyinka waxqabadka Washington iyo degmo kasta. Xogta laga helay dhammaan mashaariicda guriyeynta hoylaawayaasha ah ee ka qaybqaata HMIS ayaa lagu daray warbixinnadan.
Warbixinta Waxqabadka Nidaamka Hoyla'aanta Gobolka Washington ayaa laga heli karaa Tableau. Nasiib darro, Tableau ma taageero noocyada 8, 9 iyo 10 ee Internet Explorer. Haddii ay dhibaato kaa haysato daawashada warbixinada, isku day inaad isticmaasho Chrome, Safari ama Firefox browsers.
The Kaarka Warbixinta Degmada Waxay siisaa macluumaadka gobolka iyo degmo kasta oo ku saabsan cabbiraadaha waxqabadka nidaamka oo dhan, oo ay ku jiraan ka bixista guriyeynta joogtada ah, ku noqoshada guri la'aanta, dhererka wakhtiga guri la'aanta, iyo kharashka ka bixista guri joogto ah. Kaarka Warbixinta Degmada waxa uu ku dhex jiraa khariidad is dhexgal ah, kaas oo kuu ogolaanaya inaad dib u eegto natiijada waxqabadka muddada warbixinta. Guji badhanka Xogta Trend si aad u gasho miiska is-dhexgalka kaas oo kuu ogolaanaya inaad aragto isbeddellada waqti ka dib. Waxa kale oo ku jira macluumaadka macnaha guud sida natiijooyinka PIT Count iyo qiimaha kirada ee bannaan.
Saddexdii biloodba mar la daabaco, boodhadhku waxay bixiyaan waxqabadka, tayada xogta iyo macluumaadka sinnaanta ee degmooyinka, wakaaladaha iyo noocyada mashruuca. Waqtigan xaadirka ah, kaliya gobolada lagu daray dheelitirka joogtada ah ee daryeelka gobolka ayaa lagu daray muraayadaha nooca mashruuca ah.
Dashboardka Falanqaynta Sinaanta (shabakad)
Tracker Performance CHG (shabakad)
Dashboard Tayada Xogta (shabakad)
Waxqabadka Warbixinta Ujeedada iyo Adeegsiga
Ujeeddada Warbixinnada Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta ayaa ah in la dhiirrigeliyo waxqabadyada guryeynta ee ku saleysan caddeynta taasoo si wax ku ool ah ugu dhaqaajisa dadka ay la soo daristo hoy la'aanta inay aadaan meelo joogto ah iyo in la horumariyo ka warbixinta xogta degmada. Hadafyadan nidaamka waxaa lagu qeexay Qorshaha Istiraatiijiga ah ee Guri la'aanta.
Intaa waxaa sii dheer, warbixinnadan waxay bulshada siinayaan macluumaad ku saabsan horumarkooda ku aaddan jaangooyooyinka waxqabad ee deegaanka ka hirgalay
Sababtoo ah beel kastaa waxay dejisay jaangooyooyin waxqabad iyadoo la adeegsanayo xogta aasaasiga ah ee maxalliga ah, ma haboona in la isbarbar dhigo natiijooyinka waxqabadka ee gobollada kala duwan.
Waxqabadka Warbixinta Ilaha Xogta
Nidaamka Macluumaadka Maareynta Hoyga (HMIS) waa isha xogta ee inta badan macluumaadka loo isticmaalo warbixinadayada waxqabad. Bixiyeyaasha adeegga guri la'aanta waxay isticmaalaan HMIS si ay u ururiyaan oo ay u maareeyaan xogta la soo ururiyey marka ay siinayaan kaalmada guriyeynta dadka ay haysato hoy la'aanta.
Warbixinta Kharashaadka Gobolka ee Sannadlaha ah (The Golden)
Degmo kasta oo ku yaal Gobolka Washington waxay ka warbixisaa dhammaan kharashaadka iyada oo la maalgalinayo ilaha mashruuc kasta oo guri la'aanta ah ee bulshadooda. Ganacsigu wuxuu isku daraa xogta kharashaadka iyo xogta HMIS si loo abuuro Warbixinta Dahabka ah, ee laga helay Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee Gobolka, Warbixinta Sannadlaha ah iyo Hantidhawrka.
Tirakoobka Waqti-Waqti-sannadeedka (PIT)
Degmo kasta oo ka tirsan Gobolka Washington waxay qabataa an xisaabinta waqtiga-waqtiga-sanadlaha ah ee dadka hoy la'aanta ah ee la dajiyay Tirakoobka waxaa loo qabtaa si waafaqsan shuruudaha Waaxda Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka. Tirinta PIT waxay dhacdaa Janaayo.
Qiyaasaha Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta
Fadlan tixraac HUD qeexida warbixinta iyo HUD CoC fiidiyowyada tababarka waxqabadka si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan Cabbiraadaha Waxqabadka Nidaamka Hoyla'aanta HEARTH.
Qeexitaannada Warbixinta Ganacsiga
Isu-dheelitirka Washington ee Waxqabadka Deg-degga ah ee Deg-degga ah Gobolka iyo Soo-bixinta Tayada Xogta Xogta (PDF)
Isu-dheelitirka Washington ee Waxqabadka Guryeynta Ku-meelgaarka ah ee Gobolka iyo Soo-bixinta Tayada Xogta Xogta (PDF)
Isu dheelitirka Washington ee Waxqabadka Kahortagga Guri La'aanta Gobolka iyo Qeexitaanka Warbixinta Tayada Macluumaadka (PDF)
Sooc Warbixinta Kaarka Warbixinta Degmada Washington (PDF)
Isku-darka Deeqaha Guri la'aanta (CHG) Soo-saarista Warbixinta Waxqabadka Tracker (PDF)
Qeexitaanka Warbixinta Dashboardka Falanqaynta Falanqaynta Sinnaanta Gobolka ee Washington (PDF)
Qalabka Falanqaynta Sinaanta
Cilmi baaris qaran oo laga SPARC waxay muujineysaa in dadka midabkoodu ay si muuqata uga badan tahay dadka Cadaanka ah inay la kulmaan hoy la’aan. Qalabka Falanqaynta Sinaanta ee Washington wuxuu isbarbar dhigayaa Barta Tirada Waqtiga iyo Xogta Sahanka Bulshada Mareykanka si bulshada looga caawiyo inay falanqeeyaan farqiga u dhexeeya jinsiyadaha dadka la soo daristay hoy la'aanta. Qalabka Falanqaynta Sinaanta Washington wuxuu ku saleysan yahay Qalabka Falanqaynta CoC ee HUD.
Qalabka Falanqaynta Sinaanta Washington
Fiiro gaar ah: Waxaad u baahan doontaa inaad gujiso badhanka soo dejinta si aad u aragto oo aad u isticmaasho qalabkan.
Sanduuqa Falanqaynta Sinaanta Gobolka ee Hadhaaga Washington wuxuu eegayaa faraqa jinsiyadeed iyo qowmiyadeed ee nidaamka guri la'aanta laga bilaabo gelitaanka iyo bixidda. Waxay adeegsataa heerka gelitaanka taas oo caadi ka dhigaysa dad-hoosaadyada iyo sidoo kale waxay bixisaa tilmaamayaasha waxqabadka dheeraadka ah si ay hoos ugu dhigto heer degmo ama heer gobol.
Sawirka Hoyla'aanta ee Washington
Sawirka Hoyla'aanta Washington ee Jan. 2021 (PDF)
Kheyraadka Gelitaanka Isuduwidda
Qiyaasaha Waxqabadka HUD Hagaha Hordhaca
Qiyaasaha Waxqabadka Nidaamka HUD Noocyada Barnaamijyada iyo Shell Shell
Sharciga HEARTH ee 2009
Sharciga Caawinta Guri la'aanta iyo Caawinta Gobolka Washington
Tayada Macluumaadka iyo Falanqaynta Nidaamka Horumarinta Waxqabadka (PDF)
Khabiirka Waxqabadka (Galitaanka Isku Duwan)
Khabiirka Waxqabadka (Dhallinyarada iyo Dadka waaweyn)